Joker (2019) – MM Subtitles
Video Sources 5849 Views Report Error
စစဦးချင်းပြောမယ်ဆို ဒီ joker က superhero ဘာညာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ Thriller mystery ကားမျိုးပါ။
Plot twist တစ်ခုတိုင်း တစ်ခုတိုင်းဟာဆိုရင် ကြည့်ရှုသူကို ဟာခနဲ ဟင်ခနဲဖြစ်ပြီး ပေးချင်တဲ့ message ကိုလည်း ထိခနဲရောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး R rated movie ဆိုတဲ့အတိုင်း သတ်ဖြတ်ခန်းမဆိုစလောက်ပါပေမယ့် တကယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်။
Opinion on the plot
အကယ်၍များ ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ လူရဲ့ ဘဝဖြစ်တည်မှုဟာ အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးကြည့်ပါ။
Lets foraminute just pretend they’re all fakes!
ဖြတ်သန်းလာတဲ့ အပျော်တွေ စာမေးပွဲအောင်တုန်းက ပျော်ခဲ့တာတွေ ပထမဆုံးရည်းစားရတော့ပျော်ခဲ့တာတွေ ရည်မှန်းချက်တွေ အနာဂတ်တွေ ဟာ အတုယောင်ကြီးပါပဲဆို မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ခံငြင်းကြမှာမလား
အဲ့လိုပဲ လူဆိုတဲ့ အရာက emotions တွေရှိတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ဖက်တွယ်ထားတတ်ကြတယ်။
ဇာတ်ကားထဲက joker ကလည်း အဲ့လိုပဲ သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို ကံဆိုးနေတယ်ပဲထင်တာ သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ် လက်မခံပေးကြဘူး mental illness ရှိတယ်ဆိုပြီး ပယ်ထုတ်ကြတယ် But သူအကောင်းဆုံးနေခဲ့တာပဲ
အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာက everything has limit ပါ။ ကားတွေတောင် over limit ဆိုမောင်းမရတာတွေရှိမယ် လူဆိုပိုဆိုး သည်းခံတတ်တယ်ဆိုပြီး အမြဲရန်စကြည့်ပါလား သူ့ limit ကျော်သွားနေ့ခင်များသေပြီပဲ။
Arthur လို mental illness အခံရှိတဲ့လူဆိုပိုဆိုးပေါ့။ အကောင်းဆုံးနေတယ် bully ခံရတယ် ကုန်ကုန်ပြော သူ့ရဲ့ Doctor ကတောင်သူပြောတာတွေနားမထောင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
အဲ့မှာစပြီ “I used to think my life wasatragedy. Now I realized that itsacomedy” ဘေးမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူး နောက်ပိုင်းမှာသူယုံကြည်ထားသမျှကလည်း အလိမ်အညာတွေ သူလုပ်သမျှလည်းသဲထဲရေသွန်။ ကုန်ပြီ။ He got nothing to lose ပါ။
ဆုံရှုံးစရာမရှိတဲ့သူက တကယ်ကြောက်စရာကောင်ပါတယ်။ အဲ့ကနေ Arthur ဆိုတာကနေ Joker ဆိုတဲ့ criminal အဖြစ်ရောက်လာတော့တာပါပဲ။
Society creates criminal!
Acting ပိုင်းမှာတော့ Joaquin Phoenix က အပြောင်မြောက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အပြောအဆိုအပိုလိုမရှိအောင် အမူအရာ မျက်ခုံးပင့်တာကအစ ပြုံးတာအဆုံး အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး။ Marie ဆိုတဲ့ဘဲကြီးအဖြစ် Robert De niro ကဇာတ်ပို့တဲ့နေရာမှာရော tempo မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Shooting and sound effect
Sound effect ပိုင်းကတော့ thriller ဘက်ကို အမြူးကနေပြန် change လိုက် theme song လေးထည့်လိုက်နဲ့ ပရိသတ် ကိုလှည့်ပါတယ်။ တကယ်ပါ ရှေ့ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ခန့်မှန်းလို့မရအောင်ကို လုပ်ထားတာပါ။
Shooting ပိုင်းမှာတော့ camera angle ယူတာတွေရယ် နောက်ပြီး မှန်ဘက်ခြမ်းရော လူရောပေါ်အောင်လုပ်တာတွေ တကယ် ပညာသားပါပါတယ် but camera angle တစ်ချက်တစ်ချက် မပီပြင်တာလေးတွေရှိတယ် ဒါတွေလည်း မပြောပလောက်ပါပဲ။
IMDb Rating 8.5 796,360 votes
TMDb Rating 8.2 12,858 votes
Download 480p G Drive 386 MB
Download 480p Yandex 386 MB
Download 480p MyanCloud 386 MB
Download 720p G Drive 664 MB
Download 720p Yandex 664 MB
Download 720p MyanCloud 664 MB
Download 1080p G Drive 1.3 GB
Download 1080p Yandex 1.3 GB
Download 1080p MyanCloud 1.3 GB